သင်ဘယ်တော့မှ မချိုးဖောက်သင့်သော ဆက်ဆံရေးစည်းမျဉ်း (၄) ခု
ဘဝမှာ ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေရှိလာတဲ့အခါ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဖြေတွေကို ချရေးထားတဲ့ စာရွက်လိပ်လေးသာရှိမယ်ဆိုရင် ဘဝက ထင်သလောက်ခက်ခဲနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကနေ့မှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ ရေရှည်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတစ်ချို့ကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
၄။ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို ချစ်လာအောင် လုပ်လို့မရဘူး
လူတွေဟာ အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အပြန်အလှန်ချစ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ လူတွေဟာ တစ်ခါတလေတော့လည်း အင်မတန်ထူးဆန်းပါတယ်။ လူတစ်ယောက်က ကိုယ့်အပေါ်ဘာအမှားမှ မလုပ်ထားပါဘဲ အဲ့ဒီ့လူအပေါ် ကြည့်မရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အပြန်အလှန်ချစ်ဖို့မလိုဘူးလို့ ဆိုလိုတာပါ။
ကျွန်မတို့က တစ်ခြားလူတွေရဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေကို လေးလေးစားစားဆက်ဆံပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သို့မှသာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တိုးတက်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ပြီး ပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်စုံတစ်ယောက်အပေါ် အနိုင်ရဖို့ ကြိုးစားနေမယ့်အစား သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ ထိုက်တန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် သူတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။
၃။ သင်ချစ်မိပြီဆိုရင် ဒီအရာတွေကိုလည်း ခံစားရမယ်
လူတိုင်းမှာ အနည်းဆုံးတော့ သူတို့ရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်သဘောထားတွေကို ပြသချင်စိတ်လေးတွေရှိကြပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို လူတွေအများကြီးဆီကနေ ခွဲထွက်ပြီး သင်နဲ့အတူတူ အချိန်တွေဖြုန်းပေးမယ်၊ လေးစားပြမယ် ပြီးတော့ သင့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဂရုစိုက်ပေးတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သင်သတိထားမိမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သင့်ပါတနာက သင့်ကို လျစ်လျူရှုထားတယ်၊ သင့်အတွက်ဆို အမြဲလိုလိုအချိန်မရှိသလိုပဲဆိုရင် ဒါဟာ ရပ်လိုက်ကြစို့လို့ မပြောဘဲ ရပ်ချိန်တန်နေပြီဆိုတဲ့ သတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၂။ တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အရင်ချစ်ဖို့ လိုတယ်
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်တာက တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တာနဲ့ တစ်ခြားစီပါ။ ဒါဟာ ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒနှင့် ခံစားချက်တွေကိုလေးစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အပျော်အပါးတွေအတွက် ဦးစားပေးခြင်းနှင့် ကိုယ့်ကိုယ်အဖက်မလုပ်တဲ့လူကို ဖက်တွယ်နေတာမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်ခြင်းဆိုတာ သင့်ရဲ့ မျက်နှာနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို လှပစေပြီး အသားအရေကိုလည်း ကြည်လင်စေရုံသာမက ဘယ်လိုအခြေအနေမှာမဆို ကိုယ့်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို မြှင့်တင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်သာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဘယ်လိုချစ်ရမယ်ဆိုတာ သိမယ်ဆိုရင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့အတူ တစ်ခြားလူတွေကို ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်လာပြီး သင့်ပါတနာရဲ့ စိတ်ဆန္ဒနဲ့ ဆန့်ကျင်မယ့်အရာတွေကိုလည်း ဘယ်တော့မှလုပ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၁။ သင့်ကို ချစ်တဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် ဘယ်တော့မှ နောက်မဆုတ်ပါနဲ့(ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေနဲ့)
ဒါက ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အမှားတစ်ခုပါ။ ဘယ်လောက်ပဲ ရက်စက်ပါစေ အမှန်တရားတစ်ခုက သင့်အနေနဲ့ သင့်ဇနီးနဲ့အတူ ကလေး သုံးယောက်အတူတူရှိပြီး စိန်တွေနဲ့အလှဆင်ထားတဲ့နန်းတော်မှာ ထားမယ်ဆိုရင်တောင် သင့်ကို တစ်သက်လုံးချစ်နေဖို့ တာဝန်မရှိပါဘူး။ ခံစားချက်တွေ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါ ဘာလုပ်တာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲလို့ စဉ်းစားပါ။ ဇာတ်လမ်းဟောင်းကို အဆုံးသတ်ပြီး အသစ်တစ်ယောက်နဲ့ ဇာတ်လမ်းစမလား (သို့) ဇာတ်လမ်းဟောင်းအတိုင်း ထားလိုက်မလား? ဒါမှမဟုတ် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဖိအားပေးကြမလား? သေချာတာက ဘယ်သူမှ ကိုယ့်ချစ်ရသူတွေအတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်ချင်ကြမယ်မထင်ပါဘူး။